Titanium Nitride Upfu, TiN - Goodao Technology Co, Ltd.
anoshandiswa sehupfu inoitisa zvinhu uye zvekushongedza zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mukushisa kwakanyanya. kupfeka uye muchadenga uye mimwe minda. Iyo ficha ine yakanaka conductivity, inogona kunge yakanyungudutswa munyu electrolysis maelekodhi uye emagetsi kutaurirana uye mamwe ma conductiveIs. Inoshandiswa zvakare seine tine zvedongo mbishi matenal upfu, zvinhu zvinoitisa
Molecular fomula TIN
CAS Nhamba 25583-20-4
Unhu yero tsvuku
Kuwandisa 5. 449 / cm3.
Zvishandiso yakashandiswa asowder conductivematerials uye zvekushongedza zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mukushisa kwakanyanya. pfeka andaerospace uye mimwe minda. Iyo ficha ine yakanaka conductivity, inogona kuve yakanyungudutswa munyu electrolysis maelekodhi uye emagetsi kutaurirana uye mamwe ma conductiveIs. Zvakare usedhard torgy, tine ceramic mbishi matenal powder, conductiveerials
Zvivakwa zve titanium nitride
Titanium nitide (TiN) ine yakajairika NaCl chimiro, chiri chakatarisana-chakatenderedza cubic lattice, iine lattice inogara A = 0.4241nm. Maatomu eTitanium anowanikwa pane angular tip yekutarisana-yakatarisana necubic lattice. TiN isiri-stoichiometric komputa, uye yayo yakagadzika dhizaini ndeye TIN0.37-TIN1.16. Nitrogen zvemukati zvinogona kuchinja mukati meimwe renji pasina kukonzera shanduko muTN mamiriro. TiN powders kazhinji yero yero-shava,
ultrafine TiN powders yakasviba, uye TiN makristasi ndarama yero. TiN inonyungudika poindi iri 2950 ℃, kuwanda kuri 5.43-5.44g / cm3, Mohs kuomarara ndeye 8-9, yakanaka yekupisa kukanganisa kuramba. Izvo zvemuviri uye zvemakemikari zvimiro zve titanium nitride zvinotsanangurwa nezviri mukati senitrogen. Kana zvirimo zve nitrogen zvadzikira, iyo lattice parameter yetitanium nitride pachinzvimbo ichiwedzera, uye kuomarara kunowedzerawo microscopically, asi kudengenyeka kwepasi kwetitanium nitride kunoderera zvinoenderana. TiN ine yepamusoro inonyungudika poindi uye yakaderera density kupfuura yakawanda shanduko yesimbi nitrides.
2. Kushandiswa kwe titanium nitride
Titanium nitride ine yakanaka mumuviri uye makemikari zvivakwa, senge yakakwira kusungunuka poindi, yakanaka makemikari kugadzikana, kukwirira kuomarara, kwakanaka kuitisa, kupisa conduction uye mwenje mashandiro, nezvimwewo, izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kwazvo munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya mumunda wecermet nyowani. uye kushongedzwa kwegoridhe. Iyo indasitiri inoda zvinowedzera uye zvakanyanya titanium nitride poda. Sekuputira, titanium nitride ine mutengo wakaderera, kurwisa abrasion uye kuramba ngura, uye ayo akawanda zvivakwa ari nani pane yekupenda vharuvhu. Iyo tarisiro yekushandisa ye titanium nitride yakafara kwazvo.
Inonyanya kushandiswa mune zvinotevera zvinhu:
(1) Tin inonyanya kugadziriswa uye inogona kushandiswa mukurapa kwekurapa uye stomatology.
(2) Titanium nitride ine yakaderera kukweshesana coefficient uye inogona kushandiswa seyepamusoro-tembiricha mafuta.
(3) Titanium nitride, ine simbi inopenya, inogona kushandiswa seyakashongedzwa goridhe yekushongedza zvinhu, uye ine yakanaka yekushandisa tarisiro mune yemumwe mukadzi goridhe yekushongedza indasitiri; Titanium nitride inogona zvakare kushandiswa sekupfeka kwegoridhe muindasitiri yezvishongo. Inogona kushandiswa sechinhu chinogoneka kutsiva WC, kuitira kuti mutengo wekushandisa wezvinhu zvacho uderedzwe zvakanyanya.
(4) Super kuomarara uye kupfeka kuramba, inogona kushandiswa mukugadzira maturusi matsva, iyi mhando nyowani yematurusi pane yakajairwa simende carbide chishandiso mukurumari uye hupenyu hwebasa hwakavandudzwa zvakanyanya.
(5) Titanium nitride inyowani yakawanda-inoshanda ceramic zvinhu. Kuwedzeredzwa kweimwe huwandu hwetitanium nitrite kuTiC-Mo-Ni akateedzana cermet inogona kunatsiridza zvakaomarara zvikamu zvezviyo, kuitira kuti zvimiro zvemuviri zvecermet zvanyatsovandudzwa pakushambidzika kwemukati uye kwakanyanya tembiricha, uye yakanyanya tembiricha ngura kuramba uye oxidation kuramba kwecermet kwakagadziridzwa zvakanyanya.
Iko kusimba, kuomarara uye kuomarara kwekeramiki kunogona kusimbiswa nekuwedzera
TiN upfu kumakeramiki mune chimwe chikamu. Titanium nitride nanometer inowedzerwa kune TiN / Al2O3 multiphase nanometer ceramics, iyo yakaenzana yakavhenganiswa nenzira dzakasiyana (senge michina yekusanganisa nzira), uye izvo zvakawanikwa zvedongo zvinhu zvine titanium nitride nanoparticles zvinoumba inoitisa network mukati. Ichi chinyorwa chinogona kushandiswa sechinhu chemagetsi muindasitiri ye semiconductor.
(6) Kuwedzera imwe huwandu hweTN kune magnesium-kabhina zvidhinha inogona kuvandudza zvakanyanya kushinyira kwe slag kukwira kwemagnesium-kabhina zvidhinha.
(7) Titanium nitride chakanakisa chimiro, icho chinogona kushandiswa kune steam jekiseni zvinokanda uye maroketi. Titanium nitride zvakare inoshandiswa zvakanyanya mumabheyingi uye nekuisa chisimbiso mhete, iyo inosimbisa yakanakisa mashandiro ekushandisa titanium nitride.
(8) Kubva pane yakanakisa magetsi kudonhedza titanium nitride, inogona kugadzirwa kuita akasiyana maelektrode uye kuonana neyekutanga-kirasi zvinhu.
(9) Titanium nitride ine yakanyanya kutsika superconducting tembiricha uye inogona kushandiswa seye yakanakisa superconducting zvinhu.
Titanium nitride ine nzvimbo yekunyunguduka yakakwira kupfuura yakawanda yesimbi simbi nitridi uye huwandu hwakadzikira pane hwakawanda hwesimbi nitrides, ichiita iyo yakasarudzika yekuratidzira.
(11) Titanium nitride inogona kuvezwa pagirazi sefirimu. Kana iri infrared reflectance inopfuura 75%, kana ukobvu hwe titanium nitride firimu iri yakakura kupfuura 90nm, inogona kunyatso kugadzirisa iko kuputira kuita kwegirazi. Uye zvakare, nekugadzirisa iyo pesenti yezvikamu zve nitrogen mu ti nitride, ruvara rwe ti nitride firimu inogona kuchinjwa kuti ibudirire yakanaka yekuita maitiro.
Titanium nitride (TiN) inzvimbo yakanyatsogadzikana, isingaite nesimbi simbi, chromium, calcium uye magnesium pakudziya kwakanyanya, uye TiN Kukuru Mukutonga kwechiFascist hazviite neacidic slag uye yakakosha slag mumhepo ye CO uye
N2. Naizvozvo, TiN Kukuru Mukutonga kwechiFascist chinhu chakanakisa mudziyo wekufunda kudyidzana pakati pemvura simbi nezvimwe zvinhu. TiN inopisa kupisa nitrogen muvhavha kuti ibudise titanium nitride ine yakaderera nitrogen zvemukati.
TiN ine inokwezva goridhe ruvara, yakakwira kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, yakanaka makemikari kugadzikana, yakaderera kunyorova nesimbi yezvivakwa zvinhu, uye yakakwira kuitisa pasi uye superconductivity, iyo inogona kushandiswa pakakwirira tembiricha yezvivakwa zvinhu uye superconducting zvinhu.
Titanium nitride iri mhando nyowani yemultifunctional cermet zvinhu zvine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara uye yakaderera kukakavara coefficient, inova yakanaka conductor yemoto nemagetsi. Chekutanga, titanium nitride chakanakisa chimiro chemhando yepamusoro yesimbi ceram maturusi, steam jet propulsion, uye maroketi. Uye zvakare, titanium nitride ine yakaderera kukakavara coefficient uye inogona kushandiswa seyakaipisisa tembiricha mafuta.
Titanium nitride yemabheringi uye yekuisa chisimbiso mhete inoratidza mhinduro dzakanaka. Titanium nitride ine yakakwira conductivity inogona kushandiswa seye electrode yeyakanyungudutswa munyu electrolysis, pamwe nekona yekubatana, firimu kuramba uye zvimwe zvinhu. Titanium nitride inoyevedza superconducting zvinhu zvine yakanyanya yakaoma superconducting tembiricha.
Pashure: Hafnium Nitride Upfu, HfN
Zvadaro: Magnesium Nitride Upfu, Mg3N2
Titanium nitride upfu
Titanium nitride yeupfu Mafekitori
Titanium nitride yeupfu Fekitori
Titanium nitride powder Mugadziri
Titanium nitride poda Vagadziri
Titanium nitride yeupfu Mutengo
Titanium nitride yehupfu Quotes